जीवन-जल; A Swan Song | SATURDAYकलम | Kavyalaya - काव्यालय
जीवन–जल; A Swan Song
by सुदर्शन पौडेल August 22, 2020
यो कथाभन्दा बढी प्लट हो । कथाकारले कथाको वरिपरि वषौंअघि बनाएको प्लट जसको घेराभित्र न कथाले नै ठडिन सक्यो न अरु कथाले उम्रिन । यो प्लट घुमेको छ एउटा कलाकारको वरिपरि र कलाकार खस्कँदो करियरको वरिपरि । सम्भावित कथाको सुरुवातमा कलाकार पात्रसँग पाठकको वार्तालाप एक किराना पसलको ल्यान्डलाइन टेलिफोनमा हुन्छ ।
‘कस्तो एजेन्ट हो तिमी ? यत्रो वर्ष काम गरेर पनि यसरी बेइजत खेप्नुपर्ने मैले ?’
‘त्यो त तिमीले हेर्नुपर्ने कुरा हो नि । म साला ३–३ घण्टा हलमा पाक्छु सिकारुहरूसँग, लास्टमा २ मिनेटमै रिजेक्ट ?’
‘रोल के राम्रो हुने ? लिड, साइड–हिरो सब त्यो केसी र बस्नेतहरुलाई । म जाबो नेगेटिभमा फालिनुपर्ने ?’
‘मेरो टाउको नखाऊ किशोर । आइ एम इन् नो मुड फर योर कृटिसिजम । अर्को चोटी लेट मि नो बिफोर यु अप्रुभ फर सच् रोल्स । म घर गएर कल गर्छु तिमीलाई ।’
हाम्रो रिजेक्टेड कलाकार गोजीबाट पैसा झिक्छ । कुच्चिएको ५०० को नोट साहुलाई दिन्छ तर साहुले पैसा लिन रिजेक्ट गर्छ ।
‘भइगयो जीवन सर, हजुरजस्तो कलाकारसँग केको १०–२० रुपैयाँ लिनु ।’
‘राख्नुस् ! अनि रिचार्ज कार्ड पनि दिनुस् एउटा ।’
साहुले १०० को कार्ड दिँदै आफ्नो फोन खोल्न थाल्छ ।
‘अब हजुरजस्तो सिनेमा खेल्नेसँग पैसा लिएर के गर्नु । तपाईंले त हामीलाई सिनेमाबाटै तिरिराख्नुभएको छ नि । कलेजबाट भागीभागी जसको फिल्म हेर्न जान्थ्यौँ, आज आफ्नै पसलमा देख्नु नै लाख बराबर ।’
साहुको कुराले उसलाई आफ्नो उमेरको याद गराउँछ । ऊ यो क्षेत्रमा लागेकै २० वर्ष भइसक्यो । साहु जो उसकै चलचित्र हेरेर हुर्कियो, ऊभन्दा बुढो देखिन्छ । ऊ रुन्चे हाँसो मुस्कुराउँछ । फोन रिचार्ज गर्छ र हिँड्न लाग्छ । पसलेले फोन देखाउँदै एउटा तस्बिरको लागि अनुरोध गर्छ । उसले सहजै स्वीकार गर्छ । क्यामराको लागि अभ्यस्त मुस्कान दिँदै गर्दा सम्झन्छ, कति हप्तापछि ऊ फ्यानको लागि तस्बिर खिच्दैछ ।
ऊ पसल अगाडि राखिएको आफ्नो बाइकमा चढ्छ । हेल्मेट लक गरेर बाइक स्टार्ट गर्नै लाग्दा पसलेको छोराले सोध्छ,
‘बाबा ! त्यो मान्छे को हो ?’
पसलेले जीवन लुइटेल भनेको कलाकारले स्पष्टै सुन्छ तर सच्याउन खोज्दैन कि ऊ जीवन सिग्देल हो ।
बानेश्वरबाट गौशालासम्म आइपुग्दा उसले बितेका दिनलाई फेरि स्मरण गर्छ । कसरी मन नलागी नलागी ऊ अडिसनमा गएको थियो । कसरी आज गरेर उसले चौथोपटक भिलेनको रोलमा अडिसन दिँदै थियो र कसरी ऊ आज फेरि रिजेक्ट भएको थियो । पहिलोपटक रिजेक्ट हुँदा ऊ खुसी भएको थियो किनकी उसलई लागेको थियो ऊ भिलेन बन्नको लागि जन्मेकै होइन । त्यो बेला कलाकार भइसकेपछि जस्तो भूमिकापनि निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने उसको सिद्धान्तको भर्याङ्ग भने भाँच्चिएको थियो ।
ऊ सम्झन्छ, १० वर्षअघि कसरी प्रोड्युसरहरु फिल्म साइन गराउन उसको घरैसम्म धाउँथे । त्यतिबेला किशोर अहिलेजस्तो चुतिया भइसकेको थिएन । उसलाई छानीछानी रोलहरू आइरहन्थे र ऊ कहिले निरुता साहसँग नाच्थ्यो, कहिले जल सिहंसँग; कहिले सुनिल खड्गीलाई कुट्थ्यो त कहिले राजेन्द्र थापासँग भिड्थ्यो । त्यतिबेला जति केटीहरु ऊसँग रात बिताउने प्रस्ताव लिएर आउँथे र जति केटीसँग उसले बिस्तारा बिगार्यो, आज त्यो कुनै सुदुर सम्झनाजस्तो लाग्छ उसलाई । फोनको आवाजले सम्झनाको जङ्गलबाट वास्तविकतामा फर्कन्छ ऊ । ४२ वर्षे वास्तविकता । शरीरको मध्यभाग खुकुलो पार्छ । बाइक साइड लगाएर फोन उठाउँछ र लगत्तै बाटो मोडेर किर्तिपुरतिर हानिन्छ ।
उसलाई पर्खिरहेकी हुन्छे जल सिंह । ८ वर्ष अघि बिहे गरेर फिल्म इन्डस्ट्री छोड्नुभन्दा पहिले जल सिंहलाई नचिन्ने सायदै कोही थियो । त्यतिबेला जीवन र जलका प्रेम सम्बन्धका किस्साहरू म्यागजिनमा छ्याप्छ्याप्ती छापिन्थे । उनीहरुकै जोडीले मात्र पनि चलचित्रको सफलता निर्धारण गर्ने ल्याकत राख्थ्यो । उनीहरुलाई चलचित्रको पर्दाबाट वास्तविक जीवनमा पनि जोडी भएको देख्न चाहनेहरूको संख्या लाखौंमा थियो । तर सबैको आंकलनलाई फेल गराएर करियरको उच्च बिन्दुमा उसले होटल व्यवसायी सागर राणासँग बिहे गरेकी थिई र ऊसँगै अमेरिका सिफ्ट भएकी थिई । उसले राणासँग डिर्भोस गरेर नेपाल फर्किएको १ वर्ष मात्रै भएको थियो तर यतिबेला ऊ पहिलेकी हिरोइन जल सिंह थिइन । सामाजिक सञ्जालमा उसका तस्बिरमुनि जल गैँडा लेखिएका किस्साहरू त्यसका प्रमाण थिए ।
जलसागर होटलको एलिभेटर चढ्दै गर्दा जीवनले सोच्छ, रिल लाइफमा सँगै रोमान्स गरेका स्ट्रग्लिङ्ग हिरो र पूर्व हिरोइन – आज एक्स हिरोइनको एक्स हजबेन्डको होटेलमा एक्स हिरो रियल लाइफ रोमान्सको लागि जाँदैछ । ऊ कल्पना गर्छ यदि ८ वर्षअघि हुन्थ्यो भने उनीहरू एउटै कोठामा पसेको खबरले देश हल्लिन्थ्यो । तर अहिले उनीहरुले भिडियो नै सार्वजानिक गरेछन् भनेपनि कसैले हेर्ने छैनन् । के त्यो पसलेले हेर्थ्यो होला ?
कोठामा पुग्दा जल सिंह उनीहरुले खेलेको चलचित्र बजाउँदे हुन्छे । जीवनलाई देखेपछि फिल्म म्युट गर्छे र उसको हात समातेर कोठाको बिचमा तान्छे । जीवनमा उत्साह हुँदैन तर अस्वीकार गर्दैन पनि । टिभीमा हेर्छ, १० वर्षअघिको आफ्नै अनुहार नौलो लाग्छ उसलाई । ऊसँगै नाचिरहेकी केटीलाई त झनै चिन्न सक्दैन ।
आवाज बढाउँछे जलले र जीवनलाई आफूसँगै टाँसेर फिल्ममा जसरी नाच्न थाल्छे । कोठाको ऐनामा आफूलाई हेर्छे तर यहाँपनि आफ्नो लाग्दैन उसलाई आफ्नै अनुहार । नाचिरहेकी जललाई हेर्छ र कुनै बिभत्स सपना देखेको आभाससँगै बाथरुममा पस्छ ।
चुरोट सल्काएर मुख धोइसकेपछि बाहिर निस्किँदा जल सिंह बिस्तारामा नाङ्गै पल्टिएकी हुन्छे । फिल्ममा बलात्कारको दृश्य चलिरहेको हुन्छ र बिस्तारामा जल सिंह छट्पटाउँदै भनिरहेकी हुन्छे,
‘नाइँ ! नछो, छोड्दे मलाई छोड्दे ! थु ! पापी, नछो मलाई ! बचाऊ ! बचाऊ….’
अहँ ! यसले पनि उसलाई कत्ति उत्तेजित बनाउँदैन । खुकुलो पाइन्टमा ऊ टिभीतिर हेरिरहन्छ । बलात्कारी गुण्डाको भूमिकामा कति स्वभाभिक देखिएको छ राजेन्द्र थापालाई । ऊ कति सजिलै लुटिरहेको छ अबला नारीको अस्मिता । जीवन सिग्देल चाहँदैन जवान जीवन आएर बचाओस् जल सिंहलाई । राजेन्द्र थापाको जीवन्त अभिनय हेरिरहन चाहन्छ ऊ । तर स्कृनमा जीवन आउनुभन्दा पहिले खाटबाट आइपुग्छ जलको आवाज,
‘आऊ मेरो हिरो ! बचाऊ मलाई ।’
ऊ सिरानी समातेर यसरी टाउको बटार्छे मानौँ होटलको खाटमा उसलाई कसैले यथार्थमै बलात्कार गरिरहेको छ ।
यो हेरिरहँदा ऊ सम्झन्छ दिउँसोको अडिसन ।
‘जीवन जी ! अलि एग्रेसन चाहियो के । यु आर नट मेकिङ्ग लभ । यु आर रेपिङ हर । अलि बल लगाउनुस् न । बि मोर स्याभेज ।’
ऊ फिल्म पज गर्छ र कपडा फुकाल्न थाल्छ । स्कृनमा राजेन्द्र थापा जल सिंहको घाँटीमा टाउको गाडेर बसिरहेको छ । जीवन जान्छ खाटमा र जल सिंहको घाँटीमा उसैगरी आफ्नो टाउको गाड्छ ।
उसका हातहरू उसको वशमा रहँदैनन् । ऊ आफ्नो ओठलाई काबुमा राख्दैन । नाकबाट लामो श्वास फेर्छ र तल–माथि, दायाँ–बायाँ, जताततै जिब्रो दौडाउँछ । जल सिंह वास्तविक उत्साहले चिच्याउँछे, ‘नाइँ ! बचाऊ ! छोड्दे मलाई छोड्दे !’ ऊ रोकिँदैन । जल सिंहको आवाजले उसलाई चलचित्रको दृश्यमा लैजान्छ । ऊ जुर्मुराउन थाल्छ र जल सिंहभित्र आफूलाई प्रवेश गराउँछ । ऊ आँखा खोल्दैन । मात्र चलचित्रको दृश्यलाई दोहर्याउन लागिपर्छ । ऊ सम्झन्छ आफूलाई चलचित्रभित्र राजेन्द्र थापाले खेलेको भिलेन र जल सिंहलाई आजभन्दा दश वर्ष कलिली युवती ।
केही मिनेटपछि एक स्ट्रग्लिङ्ग हिरो र पूर्व हिरोइनको स्वीकृत बलात्कारको दृश्य चरमोत्कर्षमा पुग्छ । बलात्कारपनि स्वीकृत हुनसक्ने रहेछ ?
थकित उनीहरु दुवै पल्टिन्छन् बिस्तारामा । केहीबेर मौनताले वातावरणको सफर गर्छ ।
साइडको टेबलबाट चुरोट झिकेर सल्काउँदै जल सिंह भन्छे,
‘यसरी त म १० वर्षपछि रेप्ड भएँ ।’
उनीहरु दुवैजना हाँस्छन् तर जीवनको हाँसो धेरैबेर टिक्दैन ।
उसलाई होटलको कोठा र आफ्नो करियरको अवस्था उस्तै लाग्छ । १० वर्षअघि ऊ बलात्कारीबाट हिरोइनलाई बचाउँथ्यो र अहिले आफै बलात्कारीको भूमिका निभाइरहेको छ । जल सिंहले चुरोट दिन्छे ।
‘एउटा कुरा सोधौँ ?’
ऊ हिच्किचाँउछ ।
‘केही हैन ।’
‘सोध न ।’
यतिबेला उसका आँखाहरुले जीवनलाई हेरिरहेका हुन्छन् ।
‘डु यु थिङ्क आइ जस्ट नाउ रेप्ड यु ?’
‘हाहा ! डराएको ? डन्ट वोरी । आइ डिन्ट मिन द्याट ! हाहा ! ’
‘त्यस्तो हैन । मैले सोधेको– डिड आइ प्लेड अ वेल रेपिस्ट ? ’
‘वेल ! मलाई १० वर्षपछि यस्तो फिल भयो । हुन्छ नि, सेटमा हुँदा, ह्वेन यु आर इन द मोमेन्ट । तर डन्ट वोरी, तिम्रो करियर मैले चाहेर पनि बर्बाद गर्न सक्दिनँ । हाहा !’
‘फक् यु जलगैँडा !’
‘यु जस्ट डिड इट !’
यसपछि उनीहरु दुवै फेरि हाँस्न थाल्छन् । दोश्रो सिग्रेट सल्काउँछ जीवनले । जल वाइन पिउन थाल्छे । जीवनलाई सोचमग्न देखेर सोध्छे,
‘तर किन सोधेको तिमीले यस्तो वायर्ड क्वेस्चन ?’
ऊ चुप बस्छ तर जलको जिद्दीको सामु धेरैबेर नबोली रहन सक्दैन ।
‘म भर्खर एउटा अडिसनबाट रिजेक्ट भएर आएको ।’
जलको अनुहारमा कालो छाउँछ । अमेरिकाबाट फर्किएपछि कम्ब्याकको प्रयास गर्दा पाएको हार सम्झन्छे ।
‘र तिमीलाई थाहा छ सबैभन्दा रमाइलो कुरा ? रोल रेपिस्टको थियो ।’
बल्ल बुझ्छे प्रश्नको रहस्य ।
‘साले अन्प्रोफसनलहरु ! तिनीहरुलाई थाहा पनि छैन कस्तो हुन्छ रेपिस्ट ।’
‘म गएर बताइदिऊँ कस्तो हुन्छ ?’
जलको मजाकले हाँसो पाउँदैन । ऊ पुनः गम्भिर हुन्छे ।
‘एक त साला एजेन्ट रेपिस्ट र लुटेराको रोल बाहेक केही ल्याउँदैन । त्यसमाथि अडिसनमा बेइजत सहनु छ । दिस इज बुलसिट जल । तिमीलाई थाहा छ मान्छेले मलाई चिन्न छाडिसके । आज एउटा पसलेले मलाई जीवन लुइटेल रे । साले मेरै फिल्म हेरेर लभ गर्न सिकेको बच्चाहरु मैलाई चिन्दैनन् । मेरो पनि अब तिम्रो जस्तै हालत हो यार । इफ आइ कान्ट इभन प्ले अ फकिङ्ग रेपिस्ट देन ह्वाट्स द पोइन्ट अफ बिइङ्ग अ फकिङ्ग एक्टर ? यत्रो वर्ष काम गरेको आज यस्तैको लागि हो ? न लेगेसी न अफर । इट्स ओभर जल । आइ एम् फिनिस्ड !
एक्कासि ऊ खेलौना हराएको बच्चाजसरी रुन थाल्छ हराएको समयको सम्झनामा । रोइरहन्छ । उसको दुख बुझेकी जलले तान्छे उसलाई आफू नजिक । छातीमा टाउको अड्याएर सुम्सुम्याइरहन्छे उसको ढाड । होटल जलसागरको कोठामा जीवन जलको छातीमा टाउको अड्याएर रोइरहन्छ ।
अलि संयमित भइसकेपछि ऊ उठ्छ, लुगा लगाउँछ र केही नबोली निस्किन्छ । त्यस रात उसले कोठामा अडिसनका लागि पठाइएका सिनहरु च्यात्दै ज्याक ड्यानियल्सको अन्तिम बोत्तल रित्याउँछ । र मातेको अवस्थामा किशोरलाई फोन गर्छ ।
तैँले मेरो करियर डुबाउन लागेको ?
म को हो बिर्सिस ?
आइ एम किङ्ग अफ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्री !
मिस्टर जीवन सिग्देल ! चिनेको छस् ? हँ ? म रेपिस्ट हो ? म रेपिस्ट कुट्ने हिरो हो याद राख् !
मेरो पैसाले तैँले घर बनाएको होस् ! अहिले ठूलो हुन्छस् ? साला दलाल ! फक यु दलाल किशोरे । यु आर फार्यड । बुझिस् ? तँलाई मैले फायर गरेँ ।
ऊ केही मिनेट अझै बोल्छ तर फोन कटिसकेको हुन्छ । किशोरलाई पनि मिल्काउनुपर्ने भारी भइसकेको हुन्छ जीवन । त्यस रात जीवन आफैले बाटो खुला गरिदिएपछि उसले फोन काट्छ र नम्बर ब्लक गरेर सुत्छ ।
भोलिपल्ट भारी टाउको र खाली बोतलको छेउमा ब्यूझँदा बल्ल जीवनले अघिल्लो रात सम्झन्छ । हतारहतार फोन गर्छ किशोरलाई तर लाग्दैन । केही नलागेर अन्त्यमा जल सिंहलाई फोन गर्छ र आफू किर्तिपुर आउँदै गरेको जानकारी दिन्छ । ऊ अघिल्लो दिन पसेको पसलमा पस्छ । ल्यान्ड लाइनबाट किशोरलाई फोन गर्छ ।
‘हेलो किशोर !’
फोन काटिन्छ । फेरि डायल गर्छ, फेरि काटिन्छ । लगातार ४ पटकको प्रयासपछि बल्ल उठ्छ फोन र सुनिन्छ किशोरको आवाज,
‘अब कसैलाई पनि तिमीलाई हिरोको रोलमा देख्नु छैन । मान्छेले भुलिसके तिमीलाई जीवन । कति पापड बेल्नुपर्छ तिम्रो लागि थाहा छ ? तिमी किन यो सब क्विट गरेर मलाई शान्ति दिँदैनौ ?’
फोन काटिन्छ र जमिनमा जमेको जीवन पसलेतिर हेर्दै टोलाउँछ । पसलेको मुस्कुराइरहेको अनुहारसँगै किशोरको आवाज सम्झिन्छ,
‘मान्छेले भुलिसके तिमीलाई ।’
‘जीवन सर ! फोन काटियो ।’
‘लुइटेल हैन सिग्देल हो म साले !’
गोजीबाट १०० को नोट झिकेर पसलेको मुखमा फ्याँक्छ र हानिन्छ किर्तिपुर ।
होटल जलसागरमा पुग्दासम्म ऊ हिजोभन्दा नाजुक अवस्थामा हुन्छ । सकिएको करियर, कमजोर आर्थिक स्थिति र सम्बन्धको नाउँमा चर्चित नायिकाको भग्नावशेष; ऊ निराश हुँदै कोठामा प्रवेश गर्छ ।
आफूले वषौंदेखि चिनेको हिरो यसरी असहाय भएको चित्त बुझ्दैन जललाई ।
‘ के भयो ?’
‘किशोर लेफ्ट मि जल ! म त साँच्चिकै सक्किएँ ।’
ऊ रुने संघारमा देखिन्छ ।
‘के भो त ?’
‘सब सक्कियो नि !
उसका कामिरहेका खुट्टाहरु देखेर दिक्क हुन्छे जल । उसले चिनेको जीवन सिग्देल यो होइन । ऊ यो स्वीकार्न सक्दिनँ । गएर झकझकाउँछे जीवनलाई ।
‘हे ! मलाई हेर । किन रोएको तिमी ? तिमी एक्टर हैन ? जाबो एजेन्टले छोडेर रुने ? फर्गेट हिम ! नरोऊ ।’
‘नरोएर के गर्नु ? मलाई थाहा छैन अब के गर्ने ।’
‘ब्लडी प्रुभ योर्सेल्फ ! तिनीहरुलाई देखाऊ कि तिमी फेलियर होइनौ । देखाऊ तिमी को हौ । शो देम यु क्यान रेप ।’
जलले यही नै भनेकी हो भनेर पत्याउन उसलाई समय लाग्छ ।
‘यस् ! सो देम ह्वाट यु आर क्यापेबल अफ । आइ नो यु क्यान रेप । दे निड टु नो दिस् ।’
जीवनको अनुहारमा अन्यौलताको जालो देखेर जल आफै अलमलमा पर्छे ।
‘तिमीले किङ्ग अफ कमेडी हेरेको छैनौ ?’
जीवनले छैनको आशयमा टाउको हल्लाँउछ ।
त्यस दिन उनीहरु किङ्ग अफ कमेडी हेरेर बिताँउछन् । र दिनको अन्त्यमा जीवन यो निस्कर्षमा पुग्छ कि ऊ अब जल सिंहको बलात्कार गर्नेछ र गर्छ पनि । उनीहरु एकअर्कालाई अन्तिम चुम्बन गर्छन् र अनुहार र शरीरभरि घाउ बोकेर जीवन कोठामा फर्कन्छ ।त्यसरात प्रहरीले जीवनलाई पक्राउ गर्छ । नेपाली सिनेमा जगतको एक समयको चर्चित कलाकार जीवन सिग्देलले चर्चित नायिका जल सिंहलाई बलात्कार गरेको खबरले सबै समाचारहरूमा स्थान पाउँछ । जल सिंहलाई न्याय दिलाउन ठूलो सामाजिक दबाब सृजना हुन्छ । फलस्वरुप जीवन सिग्देललाई आजिवन काराबासको सजाय सुनाइन्छ ।
तर कथा यहाँ अन्त्य हुँदैन । घटनाको १ वर्षपछि जल सिंहको बलात्कारको कथामा चलचित्र बन्छ र जीवन सिग्देलको भूमिकामा अनमोल पहारीले अभिनय गर्छ । जल सिंह आफै आफ्नो भूमिकामा कमब्याक गर्छे र फिल्म सुपरहिट हुन्छ ।
जीवन सिग्देल जेलको कुनाबाट यो सब नियालिरहन्छ । ऊ देख्छ चलचित्रको सफलता । पढ्छ जल सिंहको छापिएको अन्तर्वार्ता जसमा उसले भनेकी छ,
‘म मेरो विगतले मेरो वर्तमानलाई जितोस् भन्ने चाहन्नँ । आखिर कलाकार हुनु भनेको जस्तोसुकै रोल खेल्न सक्नु पनि त हो । मलाई यो रोलमा खेल्ने साहस दिलाउन मेरो एजेन्ट किशोर श्रेष्ठको ठूलो हात छ ।’
जीवन हेर्छ उसको भूमिकामा खेलिरहेको जवान कलाकारको तस्बिर । हेर्छ आफ्नै जीवनको खेल । र हेर्छ फिल्म हेर्न गएका दर्शकहरुको घुइँचो । कताकता उसलाई त्यो भिड मध्यको एउटा टाउको पसलेको पनि भएजस्तो लाग्छ । उसले बल्ल बुझ्छ, वास्तवमा त्यो दिन बलात्कृत ऊ स्वयं भएको रहेछ ।
यसरी प्लट सुनाउने बहानामा कथाकारले लेखिसक्छ अर्को एउटा कथा र ऊ ल्यापटपमा सन्सेट ब्युलेभार्ड हेर्न थाल्छ ।